Cách Trồng Rau Cần Tây "ĐƠN GIẢN & DỄ TRỒNG NHẤT" | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cách Trồng Rau Cần Tây “ĐƠN GIẢN & DỄ TRỒNG NHẤT” | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cách Trồng Rau Cần Tây “ĐƠN GIẢN & DỄ TRỒNG NHẤT” | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Indlela yokukhulisa i-celery Lo ngumxholo abantu abaninzi abanomdla kuwo kwaye bawufunde, ngokungafaniyo nendlela abantu abacinga ngayo, ukulima i-celery kulula kwaye kunika izivuno eziphezulu.
Imifuno ye-Celery ithandwa ngabantu abaninzi ngenxa yokuba inomsoco kwaye kulula ukuyidla, ifanelekile kwizifundo ezininzi. Ukuza kwinqaku lanamhlanje, i-Fao iya kukukhokela kubuchule bokukhulisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kunye nendlela yokukhathalela eyona mifuno iluhlaza nesempilweni.
1 Ziziphi iimpawu zeseleri enazo?
2 Eyona ndlela isebenzayo yokukhulisa i-celery
2.1 1, Khetha indawo yokukhulisa i-celery
2.2 2, Ukwenza umhlaba wokulima iseleri
2.3 3, Qaphela ixesha apho imbewu yecelery kufuneka intshule
2.4 4, Technical khulisa imifuno yeseleri
3 Iindlela zokunyamekela emva kokufaka indlela yokukhulisa i-celery
3.1 1, Ukunkcenkceshela
3.2 2, Ukuchumisa
4 Ukulawulwa kwezinambuzane kwimifuno ye-celery
5 Ukuvuna i-celery
Ziziphi iimpawu zeseleri enazo?
Ukuntywila indlela yokukhulisa i-celery ekhaya Okokuqala, kufuneka uqonde iziseko zeempawu zabo, ngoko ukukhula nokunyamekela i-celery kulula kakhulu, akunjalo?
I-Celery ikhule emhlabeni, le mifuno ithwala ixabiso lezondlo ezininzi kunye neentlobo ezahlukeneyo zeeminerali kunye neevithamini eziluncedo kakhulu kwimpilo yabantu.
I-Celery isetyenziswa kakhulu ngabantu ekulungiseleleni izitya ezininzi, ukongeza, inokucudiswa ukufumana ijusi yemifuno ukusela, olu hlobo lwamanzi lunefuthe lokunceda ukupholisa, ukunciphisa ubuthathaka bomzimba kwaye kunokuthintela kunye nokunyanga. ukunyanga izifo ezininzi ezifana namafutha egazi, izifo zentliziyo, umqala obuhlungu, ….
I-Celery inencasa eswiti, kulula ukuyitya, ngoko ke iintsapho ezininzi zikhetha ukwenza izitya ezimnandi, kodwa ixabiso lale mifuno alitshiphu njengeminye imifuno eqhelekileyo.
Ngenxa yokuba isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sinokukhula kakhulu ngexesha elibandayo, kuthatha umzamo omkhulu ukunyamekela iimeko zemozulu ezinelanga ukuze ukwazi ukuphakamisa isityalo.
Nangona kunjalo khulisa i-celery ekhaya Akunzima nayo. Kufuneka nje ulandele iinkqubo eziyalelwa nguFao ngezantsi ukuze ukwazi ukukhulisa isisele ngokupheleleyo:
Eyona ndlela isebenzayo yokukhulisa i-celery
Ukuze ukhule isivuno esiphezulu kunye nomgangatho ophezulu we-celery, kufuneka ubeke ingqalelo kwimibandela emininzi ehambelana neemeko zemozulu, ukufuma, ubushushu, ukukhanya, umhlaba kunye nexesha lokukhula.
Ke izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo zezi:
Unokuqala ukukhulisa i-celery nangaliphi na ixesha lonyaka, kodwa i-celery ihlala ikhula kakuhle kwixesha elibandayo kunye neemeko zemozulu ezipholileyo.
Ubushushu obufanelekileyo bokukhula kakuhle kwe-celery buphakathi kwe-15 ukuya kwi-20 ° C. Ixesha elifanelekileyo lokuqhubeka. iindlela zokukhulisa i-celery ekuqaleni kwentwasahlobo nasekupheleni kwehlobo.
ICelery ikhula kwaye ikhule kakuhle kuninzi lwemihlaba enezondlo ezininzi, ugcino oluhle lokufuma, umhlaba one pH ephakathi kwe 5.8 kunye ne 6.8, icelery kunzima ukuphila ukuba uyikhulise kumhlaba one alkaline okanye umhlaba onetyuwa.
I-Celery idinga ukubonelelwa ngamanzi amaninzi kunye nomswakama, kodwa abanyamezeli ukuchithwa kwamanzi, ngoko kubalulekile ukunyamekela kwinqanaba lokulima, ukunciphisa imeko yomhlaba okhukhulayo.
1, Khetha indawo yokukhulisa i-celery
Abantu badla ngokwenza njalo indlela yokukhulisa i-celery Kumasimi amakhulu, okanye ukuba ukhula kumlinganiselo omncinci okanye ukhula isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ekhaya, unokukhulisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kwizikhongozeli ze-styrofoam okanye iibhakethi ezifumaneka ekhaya.
Le mifuno ikhula kakuhle kuphela kwindawo ezinobushushu obuphezulu, ukufuma, umoya opholileyo kwaye ifuna ukukhanya okwaneleyo kwisityalo.
2, Ukwenza umhlaba wokulima iseleri
Malunga neentsuku ezili-10 ngaphambi kokutyala i-celery, kucetyiswa ukuba usebenzise i-lime powder, ukulima kunye nokucoca lonke ukhula, ukomisa ukususa i-pathogens emhlabeni.
Ukuba ukhuliswa icelery ngqo entsimini, kuyafuneka ukutyala umaleko ukusuka kwi-1 ukuya kwi-1.5m ububanzi kunye ne-20cm ukuphakama ukuze uyihlwayele.
Inyathelo loku-1: Yenza ukufunxwa kunye nokufukamela imbewu yeseleri
Gxuma imbewu ye-celery emanzini afudumele malunga ne-35 ukuya ku-45 ° C kwiiyure ezili-15 ukuya kwezi-20, uze ususe imbewu, uhlambulule ngamanzi acocekileyo kwaye ufukamele kwitawuli emanzi kwi-25 ukuya ku-30 ​​° C iintsuku ezi-2.
Emva koko khangela ukuba imbewu iye yaqhekeka kwaye yahluma, ukuba kunjalo, vumela imbewu yome kwaye uqhubeke uhlwayela, ukuba akunjalo, qhubeka ucwina.
Inyathelo lesi-2: Phumeza imbewu yeseleri
Ngaphambi kokuhlwayela imbewu, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo ukwenza umhlaba ngokucophelela, i-hoe ukuze ukhulule. Umhlaba wokukhulisa i-celery kufuneka uxutywe nezichumiso eziphilayo ezinezondlo ezininzi, unkcenkceshelwe emhlabeni ukwenza ukufuma. Kufuneka ukhethe ixesha elinemozulu epholileyo ukwenza ukutyala.
Sika imiqolo ngokulinganayo ngobunzulu obuyi-1cm, emva koko uhlwayele imbewu emhlabeni kumgca othe tye, uhlwayele imbewu nganye malunga ne-5cm ukuqelelana.
Thatha umhlaba ocolekileyo, wogqume ngomaleko obhityileyo omalunga ne-2cm ngaphezulu, uthuthu lwamakhoba erayisi, iindiza okanye umgquba wogqume imbewu ngononophelo, sasaza imbewu yeBasudin ukunqanda izinambuzane kunye neentshulube zomhlaba ekonakaliseni imbewu yeseleri. Emva kokutyala, nkcenkceshela umhlaba ukwenza ukufuma ukunceda imbewu intshule ngokukhawuleza.
Kuthatha malunga neentsuku ezili-12 ukuya kwezili-14 ukuba imbewu yeseleri intshule. Ngokuqhelekileyo izityalo ze-celery zinenyanga enye ubudala xa zikhulile ngokwaneleyo ukuba zingatyalwa. Kungcono ukutyala i-celery emva kwemini.
Malunga neeveki ezi-2 emva kokuhlwayela kufuneka ugqume ukuze wenze umthunzi ukuze ukhuthaze ukuntshula kwembewu. Rhoqo unkcenkceshele isityalo ngedosi eyaneleyo kwaye ujikeleze kabini ngosuku ekuseni nangokuhlwa.
3, Qaphela ixesha apho imbewu yecelery kufuneka intshule
Emva kweentsuku ezili-12 ukuya kwezili-14 emva kokuhlwayelwa, imbewu yeseleri iya kuqalisa ukuntshula nokuntshula, ngeli xesha vula isigqubuthelo ukuze isityalo sikwazi ukufunxa ukukhanya kwelanga. Nangona kunjalo, musa ukubeka isityalo ekukhanyeni kwelanga.
Ubushushu obufanelekileyo bemifuno ukuba intshule ukusuka ku 15 ukuya ku 20° C, ubushushu obupholileyo kunye nokufuma.
Qaphela kwiveki yesi-2 ukuya kweyesine emva kokuhlwayelwa kwembewu, xa isityalo sikhula ukuya kubude obuyi-2 ukuya kwi-3 cm, yenza iingcambu ukugcina iingcambu zezithole zincamathele kakuhle emhlabeni.
Ngeli xesha, kufuneka usebenzise isichumisi esixutyiweyo se-superphosphate kunye namanzi ukunkcenkceshela izithole ukuze zikhule iingcambu.
Emva kweeveki ezi-5 ukuya kwezi-6 emva kokuhlwayela, izityalo ezincinci zecelery ziba nkulu kwaye zimalunga ne-8cm ubude namagqabi ama-4 ukuya kwa-6. Eli linqanaba lokuncothula isityalo ngasinye esisembizeni kwaye usityale ngokwahlukeneyo kwizikhongozeli ze-styrofoam, ii-emele ezinkulu zeplastiki, okanye zinokutyalwa ngqo entsimini.
4, Technical khulisa imifuno yeseleri
Amanye amanqaku ngaphambi kokutyala umntwana we-celery:
Iveki e-1 phambi kokutyala izithole, nikela ingqalelo ekufakeni isichumiso se-NPK esixutywe namanzi kwaye emva koko unkcenkceshele isiphunzi somthi omncinci.
Kwiintsuku ezili-10 ngaphambi kokutyala, kuyimfuneko ukuqhuba ukulungiswa okucokisekileyo komhlaba, ukusebenzisa umgquba okanye isichumisi se-bio-organic emhlabeni, uze umbe kwakhona ukuze isichumisi singene emhlabeni ukuze sincede ukwandisa i-pH ukubonelela ngezondlo kwizityalo. ixesha lokuqala lokutyala.
Phakamisa ibhedi kunye nobubanzi be-1 ukuya kwi-1.5m kunye nobude be-20cm. Tyala imithi enomgama oyi 60cm phakathi kwemiqolo kunye nomgama phakathi kwezityalo kwimiqolo eyi 20cm.
Umqolo ngamnye kufuneka utyalwe ngobuninzi bezityalo ezilishumi, akufuneki utyale umgama phakathi kwezityalo zecelery ezisondeleleneyo, njengoko oku kuyakwenza ukuba izityalo zigule, zingasebenzi kwaye zingakwazi ukukhula.
Ukukhula kwe-celery yomntwana:
Yomba umngxuma onzulu emhlabeni, yiphakamise ngobunono imbiza uze uyingcwabe emngxunyeni ukusika ingcambu. Gquma ngeendiza, i-wood humus, ingca eyomileyo ejikeleze ingcambu ukugcina umthi ufumile, kwaye ekugqibeleni amanzi ukudala ukufuma komthi.
Kunconywa ukwenza ukutyalwa kwe-celery emva kwemini epholileyo xa ilanga licimile. Kwiintsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 emva kokutyala izithole, kufuneka ugqume, wenze umthunzi ukuze uphephe ukukhanya kwelanga, uncede izithole zibuyele.
Iindlela zokunyamekela emva kokufaka indlela yokukhulisa i-celery
Inqanaba lokunyamekela i-celery libaluleke kakhulu kwaye liyimfuneko ekuphunyezweni indlela yokukhulisa i-celeryngoko kufuneka uchithe rhoqo amanzi kunye nokuchumisa ngedosi eyaneleyo ukuqinisekisa ukuba isityalo sihlala sisempilweni kwaye sikhula kakuhle.
Ukongeza, ukuba usebenzisa la manyathelo Foo angezantsi, unokuqiniseka ngokupheleleyo ngezityalo zakho zecelery.
Indlela yokukhulisa imifuno ye-celery idinga amanzi amaninzi, kuba i-celery iyakuthanda ukufuma, ngoko kufuneka unkcenkceshele rhoqo imifuno, ukungabikho kwamanzi kuya kubangela ukuba isityalo sinciphise inkqubo yokukhula kunye nesiqu ukuba sibe buthathaka kwaye sibuthathaka.
Ngokukodwa kwixesha elomileyo kunye nelanga, kuyimfuneko ukunkcenkceshela rhoqo kabini ngosuku, kusasa ekuseni nangemva kwemini epholileyo. Musa ukunkcenkceshela imifuno emini emaqanda elangeni.
Nangona kunjalo, ngexesha lemvula, kuyimfuneko kuphela ukunkcenkceshela ngokuphindaphindiweyo kanye ngosuku kwaye uvale imifuno ukukhusela amanzi emvula ekutyumzeni kunye nemifuno ebolileyo.
Ukulima imifuno ye-celery akukhuselekanga kwizinambuzane kunye nezifo, ngokukodwa kufuneka unkcenkceshele kwaye uchume rhoqo ukubonelela ngezondlo zezityalo zemifuno ukuze zikhule kakuhle.
Ukutyalwa kwemifuno kufuneka kugalelwe isichumisi se-organic, umgquba ovundiweyo, umxube we-urea, i-NPK kunye ne-superphosphate.
Emva kokuphumeza indlela yokukhulisa umntwana we-celery kwiveki e-1, kuyacetyiswa ukuba utshize izichumisi ezongezelelweyo ze-biological organic ukunceda izityalo zihlaziye kwaye zikhuthaze izityalo ukuba zikhule ngokukhawuleza iingcambu kwaye zomelele.
Ixesha elitsha lokuphumeza indlela yokukhulisa i-celery encinci ukusuka kwiintsuku ezili-15 ukuya kwe-20, uqhubela phambili ukuchumisa imifuno ngokuxuba inani le-phosphate kunye ne-urea, emva koko unkcenkceshele ngokulinganayo kwimifuno emva kwemini epholileyo ngentsasa elandelayo. .
Gcoba okwesibini ukusuka kwiintsuku zokuqala ezingama-20 ukuya kwezingama-25, xuba umlinganiselo wesichumiso se-NPK okanye isichumiso seDAP namanzi kwaye usinkcenkceshele ngokulinganayo kwisipinatshi samanzi kwingxolo yasemva kwemini. Gcoba i-3rd kunye ne-4th ngamaxesha kunye nexesha elifanayo kunye ne-dose njengexesha le-2.
Ukulawulwa kwezinambuzane kwimifuno ye-celery
Ngexesha lokwenziwa indlela yokukhulisa i-celery Kunzima ukunqanda imeko yezityalo ezosulelwa zizinambuzane, ngoko xa ufumanisa ukuba izityalo zakho zecelery zibonakala zizinambuzane, kufuneka uzitshabalalise ngokukhawuleza.
Ungazibulala ngesandla ngokuzibamba ngokuthe ngqo ukuba akukho ntshulube zininzi kwaye ukuba umthi sele wonakele kakhulu, udinga uncedo lwezibulali-zinambuzane.
I-Celery ayifane yosuleleke ngezifo ezinzulu, kodwa i-celery isenokuhlaselwa zizinambuzane ezitya amagqabi kunye neenkumba okufuneka uziqaphele ezifana nezi:
Iintshulube eziluhlaza, iintshulube, iintshulube zesilika, iintshulube, iinkumba… ukuba ufumana ezi zinambuzane zisemthini, sebenzisa elinye lala mayeza ukutshiza afana ne-Biocin 16 WP, Aztron, Dipel 6.4 WP …
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe la mayeza angasentla ukuthintela kunye nokutshabalalisa ukufikelela kwimpumelelo ephezulu.
Ngexesha elomileyo nelinelanga, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sisengozini yokonakala kwesityalo esingwevu, ukuthintela isifo, usebenzisa iCyperan 25EC, iBassa 50ND, … fafaza ngokucokisekileyo kuyo yonke indawo yesityalo.
Xa kuziwa kwixesha lemvula, imifuno ye-celery ixhomekeke kwi-rust emhlophe, ebangela izinambuzane, ukukhusela oku, kufuneka ubeke ingqalelo kwiibhedi eziphakamileyo ukwenzela ukuba imifuno ikwazi ukukhupha amanzi kakuhle. Xa ufumanisa isifo, sebenzisa iziyobisi ezifana ne-Sherpa 20EC, i-Score 250 EC, i-Regent 80WG, i-Sumicidin 10EC, i-Dithane 80WP NPV ye-biological drug yokutshiza imifuno.
Ukongeza, ngokuxhomekeke kwiimeko zemozulu, ukufuma kunye nokhathalelo, izityalo ze-celery zinokosulelwa yi-pink rot, i-black rot kunye ne-leaf blight.
Le ngxaki iphathwa ngokomeleza umhlaba ngezichumiso ze-bio-organic, ukunikela ingqalelo ukunkcenkceshela kunye nokuthena ukuba izityalo ze-celery zikhula kakhulu.
Ngokuqinisekileyo eli linqanaba ojonge phambili kulo kakhulu ngexesha lenkqubo yokukhula kwe-celery, akunjalo?
Nangona kunjalo, musa ukungxamela ukuvuna xa izityalo zingekakhuli okanye zivunwe kade, ngeli xesha imifuno ilahlekelwe zizondlo ezininzi kwaye xa ityiwe, iya kuba nzima, ingabi mnandi njengencasa yayo eqhelekileyo.
Indlela yokukhulisa i-celery ukuze ivunwe kwithuba leentsuku ezili-100 ukuya kwi-140 emva kokuhlwayela, ixesha lokuvuna kunye nomgangatho wemifuno kuxhomekeke kakhulu kwizinto zokushisa, amanzi kunye neemeko zokunyamekela.
Xa i-celery imalunga ne-30 ukuya kwi-45cm ukuphakama, uqhubela phambili ukusika isiqu sibe yi-3cm ukusuka emazantsi esityalo. Emva kweeveki ezi-2, izityalo ziya kuqhubeka zihluma.
Ngeli xesha, uxuba inani le-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-urea ngamanzi adibeneyo kwaye emva koko unkcenkceshele imifuno ukuze uncede ukuvuselela imifuno ngokukhawuleza iingcambu kunye nokukhula kwamagqabi amatsha.
Ukuba uvuna ngokuncothula umthi wonke ukuze utyale imifuno emitsha kwisityalo esilandelayo, emva kokuvuna kufuneka uphinde uphinde umhlaba ngononophelo, womise ngeentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 zokukhanya kwelanga uze ugalele umxube womgubo wekalika kunye nezichumisi eziphilayo.
Ngoko siye safunda malunga indlela yokukhulisa i-celery Kanye kunye neendlela zokutyala, indlela yokunyamekela ukufumana imifuno esemgangathweni. Ngeli nqaku, i-Fao inethemba lokuba ungazikhulisa izityalo zakho eziluhlaza zeseleri kanye eyadini yakho. Umnqweno omhle!
Kỹ thuật trồng cây rau cải xanh, cải chíp an toàn | Hatgiongtihon.net